Mpamatsy fitaovana & orinasa vaovao - Mpanamboatra fitaovana vaovao any Sina
Fisehoana: Vovoka fotsy
Fahadiovana (HPLC): 98,0% min
Plahatsoratra habe: <15um: 90min
25kg / amponga, 8mt / FCL
UN No.2811, Kilasy: 6.1, vondrona fonosana: III
Bika Aman'endrika: tsy misy loko tsy misy mavo ary ranon-javatra mavo mavo Total Amine Value (mg KOH / g): 280-303 Rano: 0,3% max Gravity manokana amin'ny 25 / 15.6 oC: 0.800-0.820 Loko (Gardner): 2max Neutralisation Mitovy (g / mol): 185-200 160kg / amponga vy, 15Mt / ISO tank UN No.2922, Kilasy: 8, vondrona fonosana: III ☑ Azo ampiasaina ho toy ny mpanova solubilizing ary mpitsikilo anti-fitaovam-piadiana mahery vaika an'ny anti-fitafiana anti-dehitra tsy solika izy io noho ny solubilité tena tsara ; ☑ Izy io dia azo ampiasaina ho toy ny additive mahomby hanatsarana ny fitahirizana ...
☑ Nampiasaina tamin'ny indostria, fanafody, elektronika; ☑ Ny vokatra dia ampiasaina amin'ny fanomanana ny akora fototra amin'ny fanafody antipsychotic, toy ny fluguabutanol, daloglabenzene, trihaloperidol, trifluoroperidobenzene, pentafluorolidol, quinolones ciprofloxacin, sns. Mandritra izany fotoana izany, dia azo ampiasaina ihany koa amin'ny famantarana ny fanafody famonoana bibikely, mpamono atody, plastika ary polymer resin. Ny tsiranoka fluorobenzene miaraka amin'ny γ - chlorobutyryl chloride dia afaka mamokatra γ ̵ ...
Apperance mavomavo mavo tsy misy loko tsy mitongilana mitambatra bromine tokana 1.0% max Fahadiovana (GC) 97% min (isomera rehetra) Maloto tokana hafa 2% max 150kg / amponga, 18mt / ISO tank UN No.3265, Kilasy: 8, Vondron'osy fonosana: II ☑ VBC dia azo ampiasaina hamoronana polyelectro-lytes miaraka amin'ireo toetra azo ampiharina amin'ny electrodeposition latex amin'ny metaly. Ny polymers hafa miorina amin'ny VBC dia misy surfactants polymerika, agents ulating miverimberina, katalista famindrana dingana, mpitatitra elektron ary viologens, resins fifanakalozana ion, ary poly ...